Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Umongameli wase-US uKamala Harris kwi-NASA kuMsebenzi oNgxamisekileyo weMozulu
Ukungxamiseka kwesayensi yoMhlaba kunye nezifundo zemozulu kuthathe indawo ebonakalayo namhlanje, ngolwesiHlanu njengoko uSekela Mongameli uKamala Harris etyelele iziko le-NASA le-Goddard Space Flight Centre eGreenbelt, eMaryland. Usekela mongameli wazibonela ngokwakhe indlela inkqubo yelizwe efunda ngayo utshintsho lwemozulu kwaye ibonelela ngolwazi olubalulekileyo lokuqonda utshintsho lweplanethi yethu kunye neempembelelo zabo kubomi bethu.
Ngethuba lokutyelela, uMlawuli we-NASA uBill Nelson watyhila imifanekiso yokuqala evela kwi-Landsat 9, i-mission edibeneyo ye-NASA kunye ne-US Geological Survey (USGS) eqaliswe ngasekupheleni kukaSeptemba. Imifanekiso ibonisa iDetroit kunye neLake St. Clair engummelwane, unxweme lwaseFlorida oluguqukayo, kunye nemimandla yelizwe laseNavajo eArizona. Ziya kongeza kubutyebi bedatha ezisinceda ukuba sibeke iliso kwimpilo yezityalo kunye namanzi asetyenziselwa ukunkcenkceshela, ukulawula izibonelelo zendalo ezibalulekileyo, kunye nokulandelela iimpembelelo zokutshintsha kwemozulu.
Imifanekiso emitsha, yonke efunyenwe ngo-Oct. 31, iphinda ibonelele ngedatha malunga neendawo eziguqukayo ze-Himalaya ne-Australia, zongeza kwirekhodi yedatha ye-Landsat engenakulinganiswa ehamba malunga neminyaka eyi-50 yokujonga umhlaba.
“Ndikholelwa ngokwenene ukuba umsebenzi wasesibhakabhakeni sisenzo semozulu. Umsebenzi wasemajukujukwini yimfundo. Umsebenzi wasemajukujukwini kukukhula koqoqosho. Ikwayintsha kunye nenkuthazo. Kwaye imalunga nokhuseleko namandla ethu, ”utshilo usekela mongameli. “Xa kufikwa kumsebenzi wethu wasemajukujukwini, amandla angenasiphelo. … Ke, njengokuba siphuma apha, masiqhubeke sibambe ithuba lesithuba.”
UHarris noNelson baphinde baxoxa ngesibhengezo seNASA se-Earth Venture Mission-3 entsha (EVM-3). Uphando lwe-Convective Updrafts (INCUS) luya kufunda ukuba iziphepho zetropiki kunye neendudumo ziphuhlisa kwaye ziqinise, eziza kunceda ukuphucula imozulu kunye neemodeli zemozulu.
"Iingcali zethu zeNASA namhlanje zisinike ukujonga okubanzi kwiindlela ezininzi esizidingayo ukuze siqonde ngakumbi iplanethi yethu, ukusuka kwimbalela kunye nobushushu basezidolophini, ukuya kwiilwandle zethu kunye neendawo ezininzi esinokuzibona zitshintsha ukusuka emazulwini," utshilo uNelson. "Ulawulo lweBiden-Harris luzimisele ukwenza inkqubela phambili yokwenyani kwingxaki yemozulu ukuze kuxhamle isizukulwana esilandelayo, kwaye iNASA isembindini walo msebenzi."
I-NASA, kunye ne-National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kunye ne-USGS, iphakathi kwee-arhente zaseburhulumenteni eziqhuba uphando lwemozulu kunye nokubonelela ngedatha yemozulu ebalulekileyo kwii-arhente kunye nemibutho yehlabathi. Imozulu embi kakhulu kunye neziganeko zemozulu - kubandakanywa imbalela, izikhukhula, kunye nemililo yamadlelo - ziba yinto eqhelekileyo. Ukuqonda okuvela emajukujukwini kusinceda sifunde isijikelezi-langa sethu njengenkqubo emanyeneyo ukuze siqonde ezi ziganeko size sincede abantu apho bahlala khona.
Usekela mongameli udibene noosonzululwazi kunye neenjineli ukuze baxoxe ngendlela ipotifoliyo ebanzi yeNASA yemishini yesayensi yoMhlaba inceda ngayo ukulungisa imingeni yemozulu ejongene nehlabathi lethu.
Imisebenzi yenzululwazi yoMhlaba ebanzi yeNASA iquka iisathelayithi ezisebenza ngentsebenziswano nezinye ii-arhente. Ezo ziquka i-NOAA kunye ne-USGS, eyayinabameli ukuba badibane noHarris.
"Ngoku kwishumi lesithandathu leminyaka, i-NOAA-NASA intsebenziswano ibeka ubuchwepheshe behlabathi kwi-space ukuze kuphuculwe amandla esizwe ukujonga nokuqikelela imozulu yoMhlaba kunye nemozulu," kusho uMlawuli we-NOAA uRick Spinrad, Ph.D. "Amaqela e-NOAA kunye neengcali ze-NASA eziku-NASA Goddard ziqhubela phambili isizukulwana esilandelayo seesathelayithi ze-geostationary, ezibizwa ngokuba yi-GOES-R, evelisa idatha ebalulekileyo yoqikelelo oluchanekileyo nolusexesheni olusindisa ubomi kunye nokunceda abantu baqhelane nokutshintsha kwemozulu."
"Imifanekiso enyanzelisayo yeLandsat 9 kunye nedatha esisiseko yesayensi iya kunceda iNdawo ngaphakathi ukulawula ngcono umhlaba kunye nezixhobo zelizwe lethu, ukugcina ilifa lenkcubeko yethu, ukuhlonela uxanduva lwethu lokuthembela kunye nabemi baseMelika kunye nabantu bomthonyama, kunye nokujongana nengxaki yemozulu," utshilo uTanya Trujillo, iSebe. kanobhala oncedisayo wezaManzi nenzululwazi wezangaphakathi. "Yonke imihla, phantse iminyaka engama-50 yogcino lwedatha yeLandsat elawulwa kwaye ekwabelwana ngayo ngokukhululekileyo yi-USGS ibonelela ngolwazi olutsha kunye nenkxaso yezigqibo kumagosa karhulumente, ootitshala, kunye namashishini ukuze aqonde ngcono kwaye alawule ngokuzinzileyo imbonakalo yomhlaba yethu."
Ngexesha lotyelelo lwakhe, uHarris wasebenzisa ingalo yerobhothi evavanyelwa uthumo lwexesha elizayo lwe-obhithi yokugcwalisa amafutha kwisathelayithi yeLandsat 7. Loo sathelayithi ngoku ifunda uMhlaba njengenxalenye yezithuthi zeLandsat.
U-Harris uphinde watyelela i-Plankton, i-Aerosol, i-Cloud, i-Ecosystem yolwandle (i-PACE) mission, ebandakanya isixhobo ngoku esakhiwayo e-Goddard kwi-2022 yokusungulwa. I-PACE iya kuqhubela phambili izakhono zovavanyo lwempilo yolwandle ngokulinganisa ukuhanjiswa kwe-phytoplankton - izityalo ezincinci kunye ne-algae ezigcina i-intanethi yokutya kwaselwandle. Inkqubo ye-GOES-R, enesathelayithi ye-GOES-T ecwangciselwe ukusungulwa kwi-NOAA ngoFebruwari 2022 ukuphucula uqikelelo lwemozulu, nayo yaboniswa.